ओली सरकार पूर्णतया असफल: देउवा – News Dainik
news २७ बैशाख २०७८, सोमबार १५:१८ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको वताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेकाे अवस्थाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्दै नेता देउवाले सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।
कोभिड रोकथाममा सरकारको भूमिकाप्रति देउवाले आक्रोश प्रकट गरेका थिए । अस्पतालमा आईसीयू, बेड र भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेकाे समयमा प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नाे प्रचार मात्रै गरिरहनु विडम्वना भएको भन्दै सरकारप्रति उनीले आक्रोश पाेखे ।
सरकार गठन मात्रै हाेइन की संविधानको उलंघन गरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरित सरकार अगाडि बढेर संविधानको पालना नगरेको पनि देउवाले वताए ।
अघिल्लॊ इट्टा बनाउन खनेको खाल्डोको पानीमा डुबी बालकको मृत्यु
पछिल्लॊ नेप्से परिसूचकमा २७.४१ अंकको हरियाली
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ९१८ कोरोना संक्रमित थपिए ,५३ काे मृत्यु
काठमाडाै । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ९१८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको …
सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति पुग्यो ?
विश्व बैंकले नेपाललाई ६ करोड डलर सहयोग दिने
आफ्नो नयाँ साइबरियल एआर एप्लिकेशन मार्फत भर्चुअल विश्व निमार्ण प्रक्रियालाई गति दिँदै ओपो
होन्डा सिबी ३५० डिएलएक्स नेपाली बजारमा सार्वजनिक
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:५४
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:४८
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:२६
सिटिजन लाइफको अनलाईन बीमा दाबी सेवा सजिलो, २ दिनमै मृत्यु दाबी रकम हस्तान्तरण
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:३८
डिशहोमले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै युरो कप, नेपाली भाषामा पनि कमेन्ट्री सुन्न सकिने
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:०२
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार १२:२७
मिस्ट्रीखोलाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:५३
रौतहटमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार
पानीमा डुबेर २ जना बालिकाको मृत्यु
नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरुको थप स्थानको नामावली सार्वजनिक
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित १५.७८९४ प्रतिशत लाभांश पारित
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात प्रयास गर्ने दुई पक्राउ
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
फेरियो पानी वितरणको तालिका, अब कहाँ कति दिनमा आउँछ ?
के कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए शरीर चुम्बकीय बन्छ ?
एक करोड ९३ लाख ७३ हजारले कहिले पाउलान् खोप ?